एमसिसी संसदबाट चाँडो अनुमोदन गर्न नेपाललाई अमेरिकाको दबाब, अब के होला एमसिसी ? - ramechhapkhabar.com
एमसिसी संसदबाट चाँडो अनुमोदन गर्न नेपाललाई अमेरिकाको दबाब, अब के होला एमसिसी ?
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले नेपाललाई प्रस्तावित एमसिसी सम्झौता छिटो पारित गर्न आग्रह गरेको छ। गएको मंगलबार अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा बसेको एमसिसी सञ्चालक समितिको बैठकले एमसिसी–नेपाल कम्प्याक्टको प्रगति विवरण लिँदै चाँडो अनुमोदन गर्न पुनः आग्रह गरेको हो।
बुधबार एमसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग परियोजनासम्बन्धी सम्झौता चाँडो पारित गर्न सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ।
एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एमसिसीलाई लिएर नेपालमा लगातार विरोध हुँदै आएको छ। गएको मंगलबार सुरु भएको संसद अधिवेशनबाट एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा सरकार रहेको दाबी गरिएको छ। तर दलहरुबीच अझैसम्म एमसिसीलाई लिएर सहमति जुटेको भने छैन।
यही परिवेशमा एमसिसी सञ्चालक समितिको त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा नेपालमा एमसिसी सम्झौतालाई लिएर भइरहेको प्रगतिबारे छलफल भएको हो। नेपाल सरकारले एमसिसी कम्प्याक्ट चाँडो अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई ‘नोट’ गर्दै सञ्चालक समितिले जति सक्दो छिटो पारित गर्न आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एमसिसीलाई लिएर पछिल्ला केही महिनामा उच्च अमेरिकी अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। यही क्रममा एक महिना पहिले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आएका थिए। उनले एमसिसी पारित गर्ने–नगर्ने निर्णय नेपालको हातमा रहेको उल्लेख गरेका थिए। file photo